Akụkọ - Otu esi ahọrọ jaket a pụrụ ịdabere na ya, anyị ga-ezere njehie ndị a
Otu esi ahọrọ jaket a pụrụ ịdabere na ya, anyị ga-ezere njehie ndị a
Otu esi ahọrọ jaketị a pụrụ ịdabere na ya, anyị ga-ezere njehie ndị a
Ọtụtụ ndị mmadụ mara na Jaketị bụ nke emere maka ndị na-anụ egwuregwu egwuregwu n'èzí. Agbanyeghị, jaketị bụ uwe eji arụ ọrụ pụrụiche nke nwere akwa mmiri na ọrụ ikuku. Otutu ndi mmadu amaghi otu esi ahota. Ha nwere atụmatụ dị iche iche na-arụ ọrụ maka gburugburu ebe dị iche iche. Ndi mmadu amaghi ga enwe otutu nghotahie, ka anyi lee anya.
Nghọtahie 1: Ọ na-eme ka mma karịa ka mma
A na-ezute ọnọdụ a n'oge oyi. Isonye n'egwuregwu n'èzí n'oge oyi, iyi oke oke dị mma maka ikpo ọkụ, mana ọ ga -ebụ ihe mgbochi. Maka ọnọdụ ihu igwe n’ozuzu, ma ọ bụ mgbe ị na-aga ije ma ọ bụ ịrịgo n’èzí, uwe ndị na-agba ịnyịnya ibu na-adịtụ arọ. N'okwu a, ọtụtụ mmadụ ga-ahọrọ jaket ma ọ bụ jaket abụọ nwere ike iwepu, nke dị mfe iji yikwasị ma wepụ ma dabara adaba maka egwuregwu n'èzí.
Nghọtahie 2: Ihe dị oke ọnụ karịa ka mma
Ọ bụ ezie na enwere ụkpụrụ na "ọnụ ala adịghị mma," jaket dị oke ọnụ adịghị mma. Họrọ jaket ahụ nwere ike iwetara gị nchebe na enyemaka ka ukwuu. Na mkpokọta, ị nwere ike ịhọrọ ụfọdụ ụdị ama ama ama, dị ka North Face, Northland, wdg. Jaketị ndị a nwere ọnụahịa dị iche iche ma ahaziri ha maka mmemme njem na gburugburu ebe siri ike. Mgbe ịzụrụ, ma ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ ma ọ bụ na ọ naghị egosi ma jaket ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Họrọ dika nke gi si eme.
Nghọtahie 3: Ọrụ zuru oke
Egwuregwu na gburugburu ebe dị iche iche ga-enwe jaketị arụ ọrụ dị iche iche. Jaketị anyị yi ga-adị irè. Hụla ọrụ ndị ọzọ ma chọọ ha. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị obodo nkịtị, ọ dịghị mkpa ịhọrọ Ọkachasị, akwa mmiri, akwa ikuku, breathable na jaket ugwu ugwu, yabụ dịka ọnọdụ gị siri dị, ekpuchighị ndị ọzọ anya na i imitateomi ndị ọzọ.